Allgedo.com » Xad-Gudub: Waa Gabay uu tiriyay Daahir Cali Cumar oo uu kula hadlayo maamulka Somaliland
Xad-Gudub: Waa Gabay uu tiriyay Daahir Cali Cumar oo uu kula hadlayo maamulka Somaliland
Print here| By: allgedo.com: Wednesday, April 19, 2017 // u Jawaab
Gabaygan magiciisu waa “Xad-Gudub” wuxuu la hadlayaa reerka Isaaq ama reer Shikh Isxaaq oo an isleeyahay xalkii soomaaliya xagooda jira markii tan alle laga tago.
Gabay wiil yaroo tiriya iyo gaalisaba daaye geeska Afrikaad oo dhanbaan laba gamuurneyne garanmaayo Faransiis Isaaq gabi ahaantiise adinkuna gafbaa laga galaad caro la giigteene Gamaadiid dartood baad doraad galwda goyseene.
Asagoon wuxuu galabsadaba ruuxna garanaynin gunta ceel madow baad dhigeen goof qaniin badane god balaayo qodotuu inataa galangalceeyaaye xabsigaad ku gaartuu indhaha gabad ka siiyaaye.
Geeri iyo midkood nolashaba gogoli taalaaye gaduu maata yahay ruux dayaa waa gagabayaaye qalbigu waa i gariiraa markaan soo garwaaqsadoye ganka baa idoorsama sidii gaad anoo qabaye.
Muslin kale gargaariyo tolkood gacan u taagyaaba guno ma,anay waayeen haduu go,o adoogoode gabanadii u dhalay waa ogoon an garow helino gidaarabay yaxoobaan iyagoo gaajo taag gabaye.
Guur iyo garoob uma tirsana tirsana gaaridu qabaye gu,u walbabana dadaas baaqatay gocosho ooydaaye dhaqmaad gabisna waa u halis intay gooni joogtahaye.
Gafku kaligi muu helin giyiguu goob walbaba yaale sunibaa gudoon loo xiroo loo god baas dhigaye garashadiisa diintiyo cilmiga looma qiil galine sidii tuug albaab soo galaad gacanta jiideene galabtana Coldoon baa gargaran geedqalkii surane.
Gidi wariyihiyoo dhanbaa gaade xulayaaye gaarbaaba laga saaranyoo gaabshe hadalkiiyo waa gunaanad seeg kii rungaloo mar un ku giirtaaye
Gowraca nin raga waayahan kama gidaadoone garwaaqsada xaniinyahaad gurtaan kii waxgalilaaye midkastoo waxgaranaayey baad gabawareysaane gacmihiina eedee halkii gaganeed weeyaane.
Dhaxal laga galiintiyo caqliga baad ka gubaataane gudin baad guntaas kala dhacdaan gooriyo ayaano geedkii ina-sanweynaad jartaan oo gobta ahaaye.
Guri diric ka soo toosay waa idiin gubide Mar hadaanu guudyacay xun iyo doqon u gowriirin gablan weeye hooyaddii Isaaq geesi dihataaye
Garmaqaate seefiyo gabuun gumuc waxaad gaarto geesaha adoon dhuganinbaad ruubtay gacalkiiye sidii neef la gawracaad baryahan hoy galgaleteene.
Garka baad is goysaa wadnaha gaarka feeraheyo galaan suni ka buuxdaa cabtaa galaxsaneyaaye gagta waxaad ku haysaa mariid gaag mareeba ahe.
Gaaleefahaad afaysiyo mindida gowracjeceshaahe guluf adiga kugu weeraraad saad u gunadaane xoog xariga kaa goynayaad guura tidicdaane.
Gararaysigii guba markii rag is garaacaayey nin waliba garaadkiis markuu mariyey geeraarka godkii uu salaam dagey hadaan gunid ka soo qaato geel laguma heluu cali ku yiri siday u goobeene ana waa gadiisii waxaan goortan leeyahaye.
Gaban aad dishiyo wiil yarood jeer xabsiga geysey ku gargaari maayaan inaad gooni noqotaaye.
Gogosheena guul taalabaad gabi u fuushaane xurmo guudka kuu saaranbaad duni ka goobtaaye Gurmad iyo waxaad orod wadaan waa galoo marane.
Isla garashadeeniyo gudoon inaan heshiis gaaro oon gacanta kuu daayabaad gool ku dhalisaaye
Galaayuuska fiinkaa wadiyo dhabadka guuleeyey gumaadkeena weeyaan waxay gama,a ladiideene gees walbaba an joognee dabaa reerihii galaye.
gacalkiyo xigaalkii go,oo gubey dadkeeniiye gaajiyo xanuuniyo markuu gumucu naafeeyey ee goobwalba lagu dilay baqo gawameene.
Giyigii ka guuroo qixii qaaradaha gooye geesaha aduunkoo dhanbay golowtamaayaane.
Gunta badaha doomaha gadoon geeri tiro beeshay gaanaha yaxaskiiyo libaax gaban wuxuu quutey Gabariyo waxaan wiil dhaliyo geesi iyo gaari gablanbaan ka joognaa guryihii waa madowyihiine.
Hadii aan gadaal dhuganoiyo galalka taariikhda adigaa u garbaynjirey markii gaade sii wadaye lixdankii haddii adan gar qaban ma,ay goboowdeene.
Adigaa isugeeyaye xornimo uma giraanteene asaageed ma garabjoogsateen taa adoo gabaye.
Godkaad shalay ka soo bixisaybay gulucaysaayo gafanaha ku naaxiyo jiridu gowda ku hayaane.
Gardaduub ayadoo loo xiroo gacal xigaal weydey oo meere lagu giijey garab u taalaaye.
Gulufkaad kasoo dhigijirtiyo nacab ku gaadeeye godol lagama maaliyo gorsoy gaaxda caanahaye ayadoon guraynbaa gabnuhu gobo,o kawaayeene gaawe lalama aade afkay kaga gasiintaane.
Gujo iyo qamaanyay intaa gowda ku hayaano qalacbay ku giijinahayaan gooriyo ayaano.
Ayadoo gabrawdoo go.odoo gibilmadoobaatey oo qorijab laga guuliyey hiilkii gocotaaye goor walbana waxay soo daydaa gudubsintiinaase maatantana halkiibaa tollow gulucdu taalaaye.
Geesta koofureed waa ka guur goboladeediiyo garashadoodu waa ganid dil iyo ruux naf laga gooyo dad gumaadkii daayoo xataa geedihii jaraye.
Adinkuna gargaar kama ad helin ganafkaad taagteene geed shishadii markaad iga tagtood garab banaanaatay cadowgii an wada gooyn jiraa gooni kuu cunaye.
Giyigii amxaar gaaban iyo haadhig baa galaye oramaha gufaacada ku yimid guurimahayaane gooraan fogeynbay ahaan gaan na caabiyaye.
Gaariga beegii u go, ee gabidhaclaynaaya ee jabhadaha gadoodsani wadaan guul ma soo sidaye shacabkaa ilgeeriga lehee guudka laga saaray
Garcadaa waxgarad iyo hadaan odayo soo gaarin maydkooda gagan waa walaa haadku geylabiye. Gurgurshaaga awrkuba hadii uu garqabad diido ama geelu kabidiisa cuno ma,ahan gaadiide guurtida talo reer gabtana waa gadoo kalaye.
Halkii ina-galayr iyo intaan hawshu gabax gaarin oo goorgoor tahay ragow geedka ina keena nin waliba gartiisa ha naqdee gole inoo xaara.
Daahir Cali-dhuux Cumar